Ny machete Gemlight dia amboarina amina vy vy lohataona manokana miaraka amin'ny avo Manganese nohatsaraina. Vy SAE1070. Ny mangahazo, rehefa tezitra, dia manome henjana ny lelany, sady mahazo tanjaka sy hamafisana kokoa ary manatsara ny toetran'ny vy mafy.
Ny machete Gemlight dia ny famonoana sy ny famonoana ny lelany, izay nanamafy ny hamafin'ny optimum, ny fahafaha-manao ary ny fanoherana. Ary ny Hardness dia HRC45-55. Ny tarehy tsirairay amin'ny lelan-tsabatra dia manana alitara telo izay manampy ny fanesorana ny antsy amin'ny sapwood. Ny lalan-drivotra dia manitatra hatrany amin'ny volotara amin'ny lelany mba hamoronana hidin-trano mekanika miaraka amin'ny tanany. Ireo tsipika telo-boribory dia mihetsika ho toy ny ozatry ny lelany ka mahatonga azy io tsy ho vaky intsony. Ary mitohy amin'ny alàlan'ny halavan'ny tahony.
Ny tantana plastika dia misy fiantraikany be amin'ny polypropylene, malefaka. Rehefa mitazona, dia tena ahazoana aina ny fikasihana ary tsara kokoa ho an'ny asa maharitra. Ny tantana dia napetaka amin'ny lelany miaraka amin'ny rivet vy sy fanasana vy. Ny tantana plastika dia misy fiantraikany be amin'ny polypropylene, malefaka.
Halavan'ny lelany 22inch Halava tanteraka 27inch
Firenena nihaviana Shina Vondrona lava 19inch etsy ambony
Ho an'ny fanadiovana kitay, ahitra ary rantsana kely.
Ho an'ny voly marobe: fary, kafe, sns.
Ny fonosana dia amin'ny 60 pcs / ctn, ny antsy tsirairay amin'ny kitapo plastika iray, avy eo 5 dozs isaky ny boaty misy taratasy anti-hamandoana.
Fonosana araka ny takinao. Manome fonosana antsinjarany koa izahay
Teo aloha: Mifidiana famaky
Manaraka: Angady sy angady
Machete amin'ny fary